Asalka iyo Bilowga Wadaaddada Soomaaliya: “Diin mise Dan kale!” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdixakiim-Tiyari Cabdillaahi Aaden — February 12, 2020
Eebbe ( kor ahaaye) umuu abuurin ilmo Nebi Aadem u jeeddo aan ka aheyn iney (Caabuddaan); oo u hoggaan samaan xaggiisa. Taas waxa weheliya, iney jiraan waxyaabo lagu kala abaalmarinayo nolosha dabaddeed, taas oo ku suntan: janno iyo naar. Si haddaba, janno iyo naar loogu kala dooro, maya.! Ee isagu u doorto, waa iney jiraan waxyaabo ku kallifaya inuu raaco ama diido.
Ahmiyadda kowaad ee igu dhalisey in aan maqaal kooban ee cilmiga iyo daraasadda halkan idin kula wadaago, waa – xasuuqii iyo dabargoyntii umaddii Soomaaliyeed ee ku naf-weydey ‘Qaraxii Muqdisho’. Qaddar kooban oo aamusnaan ah ( ). Ilaaheenna weyn waxaan uga beryeynaa, inuu dadkaas naxariistiisa ugu deeqo; inta la ildarran saameyntii dhibaatadii dhacdey na, iyagana caafimaad eebbe ha ugu beddelo.
Soomaalidu dharraaro ayay soo martey ay ahaan jirtey “Dheemankii Afrika”. Qaab-dhismeedka noloshooduna ay is-dhammeystireysey. Haddey ahaato: dhan-dhaqan-dhaqaale, heer ay ka gaadhey tacliinta, caafimaadka, waxbarashada, beerashada; xag dawladnnimana, muddo kooban buu adduunka la ashqaraarey – “Awooddooda” – iyo “ saanadda ciiddankooda”. Intaasi ba eegga waa habeen tagey soo ma laabto; ama dharraaro xusuustood.
Caqliga garashadu ay ku dheehan tahay, waxbuu goconayaa, waxna wuu tabayaa, waxna wuu taabaya. Amarka alle! Caqliyo ayaa jira moogan cibbaarada Soomaalida lagu sallidey. Waa duni iyo caadadeed e, aafada, qaxarka, niyad-jabka, dib-socoshada, abaaraha, dawlad la’aanta, intaas iyo kuwo kale oo badan baa, waa ibtilada Soomaali lugta ka xidhey, asaagood na ka reebtey.
Awal maa la odhan jirey: Qeyrkaa ka hadh waa habaar. Aafooyinkaas kala jaadka ahí, midkastaba, gaarkiis in loo raadceeyo ayuu u baahan yahay – waanna waxa
u baahan in si (Cilmi ku dhisan loo fallanqeeyo).
Bilowga waddaada Soomaaliya, waxey asal ahaan kasoo unkameen meelo ka qoto-dheer, sida eegga la mutuhiyo. Siddeedaba, aadanuhu hantida ugu balaadhaan ee eebbe ugu deeqey waa – Caqliga. Caqliga eebbe wuxuu inoo siiyey ineynu ka fekerno, oo ku kala saarno samaanta iyo xumaanta. Xayawaanka waxeynu kaga duwanahey – waa garashada iyo garaadka, waxba la ma dhaameen ma-noolaha iyo kalluunka heehaaba hawada, iyo kuwo kunool badda hoosteeda.
Dhaqanka iyo fikirka bulshada Soomaali kasoo fula, waxa laga dhex-dheehan karaa in – “ Carabnnimo” badani ay dhex-ceeggaagto. Waanna sababta keentey, in aynnu Carab isu-naqaanno; la baxney – Magacyo Carbeed ( Lagana guurey, magacyaddeenni ku dhisnaa xikmadda iyo murtida). Kol ay bulshadu ka fogaato hiddaheeda iyo dhaqankeeda, waxey dhammaan wajahaan – burbur baahsan oo dhinac kastaba ah.
Soomaali badan ayaan isku arkin inay yihiin Afrikaan; si ahaanna uga geddisan amma ka baxsan. Waxayna ka sheegaan hadallo iyo sifooyin qallafsan oo ay ku tilmaamaan dadka amma jinsiyadaha kale ee ay u yaqaannaan ‘Afrikaanka’, amma ‘Madowga’ amma ‘San-Weynta’.  Mid ka mid ah sababaha ugu wacan dareenkoodan ah inay isku arkaan inay ka duwan yihiin dadyowgaasi kale, waxa weeye Soomaalida oo ah dad si sahal ah loo soo sooci karo inay yihiin dad is leh oo isku hayb iyo uskun ah, amma xattaa isku ‘sinji iyo sawrac’ ah. (eeg qoraalka Richard Dowden, Africa: Altered States, Ordinary Miracles, London, 2008).
Dunida Islaamka iyo Islaannimada
Islaannimada aynnu gobyaaleynaa, waa mid jaadma ah? Ma in ruux bini’aadam ah oo ilaahey karaameeyey Islaannimo lagu doonaa?! Ma in Jihaad aan jiho laheyn la wadaa? Mise, in qalinka iyo Maskaxda la adeegsado, ayaa ka roon – inaad xoog wax ku doonto!
Dhirta xididka hoosa, dhirta loogu beero, dhismahooda weeyaan; sidaas si lamid ah, ayay ‘Garashada’ iyo ‘Caqliga fayow e,’ u yihiin dhismaha aadamiga. Hadraawi baa la ga hayey: “ Garashadu Sahraay ruuxa, Sed u gaara weeyaane”.
Sida la sheego kooxda aragagaxida ah ee lagu magacaabo “ Al-Qaeda”, waxey ka dhalatey – afkaartii iyo caqiidadii Sayid Qutb. In Osama Bin Laden, loo maleynayo inuu ahaa – walaalkii Sayid Qutb, kaas oo jaamacadda Jeddah dhigan jirey, loona yaqaanney Abdul Aziz.
Dagaalka la magacbaxey Jihaadka, ee Palestine ka socda, isna waxa la xidhiidhiyaa Sayid Qutb afkaartiisa. Hoggaamiyaha rooxaaniga, ee waddanka Iran ‘Ayotallaah Ali Khamenei’, inbadan oo kamid ah qoraaladdii Sayid Qutb, waxa uu u turjuntey luqaddiisa Faarisiga. 
Qoraa katirsan Al-Qaacida, laguna magacaabo “Yuusuf Al-Ayyeri ( lagu diley Riyadh, June 2003), ayaa buuggiisi u dambeeyey ee ahaa, The Future of Iraq and the Arabian Peninsula after the fail of Baghdad, ku yidhi: “… Keliya, Mareykanku kula ma jiro Islaamka dagaal, ee xataa wuxuu halis ku yahay mustaqbalka Islaamka, waanna waxa loo yaqaan ‘Dimuqraadiyadda Ameerika!’” . ( eeg qoraalkeygi ah: Islaamku ma la jaan-qaadi karaa Dimuqraadiyadda, Addis-Ababa, 2015) Intii dawladaha Carabtu ay dhereg-dhacsanayeen, ayaa asaagoodi ka xanfarey, sidii Xiin-finiin. Intii Jihaad jiho laheyn lagu baaqayey ayay dunida ka dheereysey!
Aragtida caanka ah ee laga aaminsan yahay umadda Carabtu iney yihiin ‘Dad qani’ ah. Akhriste ma ogtahay, in waddanka ugu qanisan waddamada Carabta ( kolka loo eegayo ‘ Soo saaridda Saliidda) uu wax-soo-saarka Arjantin ( Argentin) / ama South Korea – ay laba laab ka badan yihiin 1/10 waddanka Carabta ugu qanisan.  Isku celceliska tira koobka bulshada Carabtu waa 300 Milyan, 65 Milyan oo kamid ah ayaan waxba akhrin waxna qorin [ = Iliterate], jajab ahaanna saddex meelood, labo meelodi waa haween 2/3.
Daraasad ay UNESCO soo saartey waxey ku sheegtey in Carabtu 1% ( 6,500) ay dunida buugta la daabaco ka yihiin, halka North America iyo Latin America ay so saaraan 102,000 iyo 42,000 oo buug. Haddaba, akhriste Carabta aynnu awrkeenna daba-dhigney, waad aragta xaalkooda iyo waayahooda; Soomali ahaanna, sidoodi ayaynu noqoney/ ama ku soconnaa. Hayeh. Adiga iyo garashadaa! Soomaaliya iyo waayaheeda.
Sida ku bilaabmeen urur-diimeedyada Soomaaliya, iyo sida ay xidhiidhka ula leeyihiin dunida Carabta iyo afkaarahooda ayaan usii dhuun-dhaadhici. Wixii ka horreeyey guumeysiga mey jirin wax urur-diimeed la yidhaahdo. Anse intii xornimada la qaatey, waxa bilowdey dhaqdhaaqyo urureed, kuwaas oo ka dab-qaadanayey ururada ka dhisan Masar iyo Suudaan. Xilligaas waddanka waxa culimo u ahaa “Suufiyadda”. Sida ay Soomaalidu diinta ku aheyd waxa laga dhex akhrinsan karaayey hab-dhaqankooda iyo caadooyinkooda.
Waxa la aaminsanaa in 40 jir dadku ay ku tooban keenaan; cidda gasha goobaha cibaaddadana ay ahaayeen ‘ Odayaal noloshooda soo gudhey’. Gabadha timaha qarisa, waxa loo aaminsanaa – ama la weyddiin jirey:” Naa..Miyaa lagu guursadey / ama in la guursadey?!”.
Jirtey oo – qaladaad badan oo diiniyan qallooca, oo ay xambaarsanaayeen Suufiyadu, — Sh. Nuur Cali Cadlow, ayaa la tilmaama inuu ahaa wadaadkii u horreeyey ee baraarujiyey qaladaadka Suufiyadda . Ninkii u horreeyey ee aasaasa urur-diimeed, wuxuu ahaa nin katirsan “dariiqa Qaaddiriyada”. Urur diimeedkaas macagiisa wuxuu ahaa ‘Al-Nahda’[ wuxuuna xambaarsanaa afkaartii ururka ka dhisan Masar ‘Ikhwaan Musliimka’, ee Xasan Al-Banna uu aasaasey, Sayid Qutb na xubin ka ahaa].
Kaddib, ururkaas waxa la wareegey rag ay ka mid ahaayeen Xasan Indhaceel, waxaana loo beddeley ‘Al-Ahal’. Waqigaas waxaa Waqooyiga Soomaaliya ka jirey urur la odhan jirey ‘ Waxdatu Al-shabab’. Waxaa midow ku heshiiyey ururka Al-Ahal iyo ururkii ka dhisnaa Waqooyiga Soomaaliya Waxdatu Al-shabaab. 1978-kii waxa la aasaasey ururka Al-Islaax – ‘ waxaana hoggaamiye u ahaa Sh.Maxe’d Gadh-yare. Fikradda uu xambaarsanaa ay aheyd Ikhwaan Muslimka’.
Waxaana Soomaaliya ku faafey fikraddaas Takfiirka, oo ilaa ammintan aynnu neefsaneyno masiibo ku haya deeggaanka Soomalida. 1978-kii Amiirkii heystey ururka Al-Ahal ayaa qaatey fikradda ‘ Takfiirka’ ee Sayid Qutb [ = Takfiiriyiintu waxey soo bilaabentey waqtigii Khaliif Cali Bin-Abi Daalib. Waxaana loo bixiyey Khawaarij, waxey na banneysteen dhiiga umadda ]. Ururkii Afraad ee la dhiseyna wuxuu noqdey: Al-Jamaaca Al-Islaamiya.
Ururkii Shanaad ee ku xigeyna wuxu noqdey: Al-Ikhwaanu Muslim – oo xambaarsan isla afkaarta ‘Ikhwaanka’. Kol dambe waxa xuub-dillaacsadey ururka Itixaad, ee ka dhisan Suudaan [ Xasan Turaabi]. Waxaa la aaminsanaa kal horre in Itixaadku yahay Salafkii, jirto se – caddeymo sheegayo inuu ka noqdey, ama loo garan ogyahay ‘ Wahaabiyo’. Kooxda ugu xoogga weyneyd kooxaha diiniga ah ee ka soo baxay Somalia sannadihii 1990-yadii waxay ahayd al-Itixaad al-Islaamiya.
Waxay ka abuurantay dhawr urur-goboleed oo isku darsamay oo dhammaan taabacsan mad-habta Wahaabiga ee lagaga dhaqmo dalka Sucuudiga, oo aad u adag, aadna uga duwan dariiqooyinka waaweyn ee diiniga ah ee Soomaalidu ku dhaqanto.
Ururkii al-Itixaad waxa uu baaba’ay markii hillaadu maraysay badhtamihii 2000, laakiin siyaabo badan waxa uu u noqday gogoldhig horseeday dhalashada ururka al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah, oo uu ku jirey isna ururkii Xisbul Islaam ee la jebiyey sannadkii 2011, aanu ka adkaaday ururka al-Shabaab, kuna biiray oo lagu daray al-Shabaab.
Qaar ka tirsan xubnihii al-Itixaad waxay ka mid noqdeen hoggaamiyayaasha waaweyn ee Midowgii Maxkamadaha Islaamiga ah, ururka al-Shabaab iyo kooxo kale. Waxa ku jirey dadkaasi Ahmed Abdi Godane, oo loo yaqaan Abu Zubeyr, hoggaamiyaha al-Shabaab .
Dhinacyo badan marka laga eego, al-Shabaab waxay noqonaysaa uun ururkii al-Itixaad oo halkii laga sii ambaqaaday amma laga sii wadey, marka loo eego afkaarta iyo aragtida ay taabacsan yihiin ee ay wataan: labada kooxoodba waxay aaminsan yihiin in aanay diintu ka reebanayn siyaasadda oo aan la kala sooci Karin, waxa kale oo ay ka siman yihiin quudhsiga iyo dhaleecaynta dariiqada Suufiyadda ee Somalia oo ay u arkaan mid aan ku bannaanayn Islaamka.
Sida weyn ee Al-Shabaab ay uga soo horjeeddo dhaqanka Suufiyadda, waxa muujinaya ilaa heerka ay socdeen ee ay ku buriyeen weyneyntii iyo heybaddii culimada waaweyn ee suufiyadda, kuna burburiyeen dhawr ka tirsan qabuurihi culimadaasi, iyo maqaamyadii musheekhda waaweyn .
Tusbaxaas ‘anna weykan!’ ahaa sidii geel xeradda laga siidaayey buu noqdey. Taariikhdu waa wax soo noq-noqonaysaa mar kasta iyo marba marka ka danbaysa. Kooxaha Islaamiyiintuna waa qaar marna dhasha oo soo if-baxa, marna burbura oo meesha ka baxa.
Waxana isbedelayaa magacyadooda, laakiin isla noocii dadka iyo fikradihii, amma isla mabaadi’dii ayaa mar walba soo if-baxa. Laga soo bilaabo 2006-dii, Somalia waxay ahayd tusaalaha ugu fiican ee la soo qaadan karo marka laga hadlayo guuldarrada siyaasadda.
Mid ka mid ah ‘guuldarrooyinka’ ugu waaweyn ee ku dhacay siyaasadaha ku aaddanaa Somalia waxay noqotay in lagu dhegganaa uun oo dabada la sii hayey shirar dhaadheer oo ‘nabadeed amma dib u heshiisiineed’, oo caaalamku abaabulo, kharash badanina ku baxo, laguna qabto dalka debaddiisa. Ilaa imikana waxa la qabtay in ku dhawdhaw labaatan shir oo noocaasi ah oo aan midna lagu guulaysan. Shirarkaasi waxa ka dhashay dawlado daciif ah oo kala danbeeyey oo ku-meel-gaadh ahaa, oo mid walba guuldarro ku danbeysey.
Dawladahaasi waxay ka jireen oo keliya oo ay maamulayeen qaybo kooban oo ka tirsan dalka, mararka qaarna awoddoodu maba gaadhsiisnayn wax ka badan dhismayaal amma sakado dhawr ah oo madhan oo ka tirsan magaalo-madaxda Muqdisho .
Dagaal qabiil, iyo koox mitid ah oo u dagaalamaya sidii ay xukunka u qabsan lahaayeen. Arrinku , ma aha Diin, ee dantooda, iyo Idiyoolajiyad ay doonnanayaan iney Soomaaliya ku reebaan.
Diin mise Dan kale! Aayaha Soomaaliya iyo rejadii Soomaaliyeed, cidda godka ku riddey waa urur-diimeeyadaas, oo ay kujiraan – tirada ugu badan ee ragga kusoo dhuunta waddaadnnimada ama Shiikhnnimada. Inta qalbigoodu saafiga yahay waa farr-ciddood. Guntii iyo gebegabadii, waxaan citiqaadsannahey, in haddii shacabka Soomaaliyeed u heellan yihiin ama ay naawilayaan iney nabad helaan, waa iney nafahooda ka bilaabaan.
Akhri buugga: Ilbaxnimadii Adal iyo Saldanihii Soomaaliya1 Ajami, Fouad, 1, 5, 66, 1982 al-Azhar (University), 45, 158, 168–693 Arab Knowledge Report (2009), 1634.Argentina, 1645. Crisis of Islamic Civilization (Allawi), 137–386. Democracy: A Religion (al-Maqdisi), 1887. Development of a Jihadist’s Mind (Hamid), 1168. Introduction to Islamic Theology and Law (Goldziher), 269. Muslim Brotherhood, 174, 17710. UN Arab Human Development Report (2002), 16311. UN Arab Human Development Report (2003), 134, 147, 160–61, 166, 17612. UN Arab Human Development Report (2009), 13413. International Crisis Group,Somalia’s Islamists, 2005, p. 1, www. crisisgroup.org/en/regions/africa/ horn-of-africa/somalia/100-somaliasislamists. aspx (Markii ugu danbaysay ee la eegay August 2011).14. 1 Human Rights Watch, Harsh War, Harsh Peace, April 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/04/13/harshwar- harsh-peace (Markii ugu danbaysay ee la eegay, August 2011).15 Ioan Lewis, Saints and Somalis: Popular Islam in a Clan-based Society (London: Haan, 1998), p. 25.16 Stig Jarle Hansen and Atle Mesoy, The Muslim Brotherhood in the Wider Horn of Africa, NIBR, p. 40, http://www.nibr.no/uploads/publications/ 06d76b6e0d14594c9a753c487ed50e51.
Tags: Asalka iyo Bilowga Wadaaddada Soomaaliya: “Diin mise Dan kale!”
Next post Jidkii Qodxaha Badnaa ee Waxbarashada
Previous post Sidii Aan Kugu Lisay Iiguma Aadan Hambeyn